Vagari vanonzi vari kushanda vakabatana nemamwe makambani kuvhura migwagwa pamwe nekuchenesa nzvimbo dzakakanganiswa neCyclone Idai.
Mumiriri weChimanimani West mudare reparamende vari nhengo yeZanu PF, Amai Nokuthula Matsikenyere, vanoti zvinhu zvinenge zvave kutanga kuratidzika mudunhu ravo zvichitevera mabasa ari kuitwa nemasangano anobatsira akasiyanasiya pamwe nehurumende.
Vanoti hurumende yakabatana nemasangano aya, iri kugadzirisa migwagwa pamwe nemabhohoro zvakanga zvaparadzwa nedutumupengo.
Amai Matsikenyere vanotiwo vanhu vakawanda mudunhu ravo vave kuwaniswa chikafu nekuda kwekugadziriswa kwemigwagwa nemazambuko zvakanga zvaparadzwa.
Varambawo mashoko ekuti chikafu chiri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika, vakati mudunhu mavo vezvematongerwo enyika havasi ivo vari kusvitsa chikafu kuvanhu.
Hurukuro naAmai Nokuthula Matsikenyere
Zvichakadaro, vagari vekwaMutsvangwa kuChimanimani East vanoti vaswera vakagarira guyo sembwa sezvo chikafu chavanga vavimbiswa kuti chichadonhedzwa nendege kudunhu mavo chisina kuuya.
Kanzura veWard 23, VaJoel Dhumakwezu veMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa vanoti chikafu chazouya nendege duku mukudoka kwezuva chadonhedzerwa pakiriniki yepaMutsvanga, uye chinonzi changa chiri chishomashoma.
Vanoti kunyange hazvo vazovimbiswa kuti rumwe rubatsiro rwuchadonhedzwa kunzvimbo yavo nekukasika, vari kutadza kunzwisisa kuti sei rubatsiro urwu rwusiri kutakurwa nedzimotokari, sezvo vakagadzirisa migwagwa mizhinji yakanga yakanganiswa nemvura.